Setting | English
NRC Front Page *
NRC Back Page *
City * -- Please Choose -- Ah Thoke Township (Ayeyarwady) | အသုတ်မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ahhtoung Township (Ayeyarwady) | အထောင် မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ahlone Township (YGD) | အလုံ မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Ahmar Township (Ayeyarwady) | အမာ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Amarapura Township (MDY) | အမရပူရမြို့နယ် (မန္တလေး) Ann Township (Rakhine State) | အမ်းမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Aunglan Township (Magway) | အောင်လံမြို့နယ် (မကွေး) Aungmyaythazan Township (MDY) | အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် (မန္တလေး) Aungpan Township (Shan State) | အောင်ပန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Ayadaw Township (Sagaing) | အရာတော်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Ayetharyar Township (Shan State) | အေးသာယာ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Bago (Bago) | ပဲခူး (ပဲခူး) Bahan Township (YGN) | ဗဟန်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Bahtoo Township (Shan State) | ဗထူးတပ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Banmauk Township (Sagaing) | ဗန်းမောက်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Bat Ye Township (Ayeyarwady) | ဘက်ရဲ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Bawlakhe (Kayah State) | ဘောလခဲ (ကယားပြည်နယ်) Bhamo (Kachin State) | ဗန်းမော် (ကချင်ပြည်နယ်) Bilin Township (Mon State) | ဘီးလင်းမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Bogale Township (Ayeyarwady) | ဘိုကလေးမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Bokpyin Township (Tanintharyi) | ဘုတ်ပြင်း မြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Botahtaung Township (YGN) | ဗိုလ်တစ်ထောင် မြို့နယ်(ရန်ကုန်) Budalin Township (Sagaing) | ဘုတလင်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Buthidaung Township (Rakhine State) | ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Chanayethazan Township (MDY) | ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် (မန္တလေး) Chanmyathazi Township (MDY) | ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် (မန္တလေး) Chauk Township (Magway) | ချောက်မြို့နယ် (မကွေး) Chaung Thar Township (Ayeyarwady) | ချောင်းသာ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Chaung-U Township (Sagaing) | ချောင်းဦးမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Chaungzon Township (Mon State) | ချောင်းဆုံမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Chaw Sin | ချောစင် Chinshwehaw Township (Shan State | ချင်းရွှေဟော် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Chipwi Township (Kachin State) | ချီဖွေမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Dagon Seikkan Township (YGN) | ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Dagon Township (YGN) | ဒဂုံ မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Daik-U Township (Bago) | ဒိုက်ဦးမြို့နယ် (ပဲခူး) Dala Township (YGN) | ဒလမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Danai Township (Kachin State) | တနိုင်းမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Danubyu Township (Ayeyarwady) | ဓနုဖြူမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Darka | ဒါးက Dawbon Township (YGN) | ဒေါပုံ မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Dawei (Tanintharyi) | ထားဝယ်မြို့ (တနင်္သာရီ) Dawthponeyan Township (Kachin State) | ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Dedaye Township (Ayeyarwady) | ဒေးဒရဲမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Dekkhina Thiri Township (NPT) | ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Demoso Township (Kayah State) | ဒီမောဆိုမြို့နယ် (ကယားပြည်နယ်) East Dagon Township (YGN) | ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Einme Township (Ayeyarwady) | အိမ်မဲမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Falam (Chin State) | ဖလမ်း (ချင်းပြည်နယ်) Gangaw (Magway) | ဂန့်ဂေါ (မကွေး) Gwa Township (Rakhine State) | ဂွမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Gyobingauk Township (Bago) | ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် (ပဲခူး) Gyobingauk Township-Dana Thiha (Bago) | ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်-ဓနသီဟ (ပဲခူး) Hakha (Chin State) | ဟားခါး (ချင်းပြည်နယ်) He Hoe Township (Shan State) | ဟဲဟိုး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Hinthada (Ayeyarwady) | ဟင်္သာတ (ဧရာဝတီ) Hinthada (Bogale) | ဟင်္သာတ (ဘိုကလေး) Hinthada (Natmaw) | ဟင်္သာတ (နတ်မော်) Hinthada (Ta Lote Kone) | ဟင်္သာတ (တလုတ်ကုန်း) Hkamti (Sagaing) | ခန္တီး (စစ်ကိုင်း) Hlaing Thar Yar Zone (1) | လှိုင်သာယာ ဇုံ (၁) Hlaing Thar Yar Zone (2) | လှိုင်သာယာ ဇုံ (၂) Hlaing Thar Yar Zone (3) | လှိုင်သာယာ ဇုံ (၃) Hlaing Thar Yar Zone (4) | လှိုင်သာယာ ဇုံ (၄) Hlaing Thar Yar Zone (5) | လှိုင်သာယာ ဇုံ (၅) Hlaing Thar Yar Zone (7) | လှိုင်သာယာ ဇုံ (၇) Hlaing Township (YGN) | လှိုင် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Hlaingbwe Township (Kayin State) | လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် (ကရင်ပြည်နယ်) Hlaingthaya Township (YGN) | လှိုင်သာယာမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Hlegu Township (YGN) | လှည်းကူးမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Hmawbi Township (YGN) | မှော်ဘီမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Ho Taung Township (Shan State) | ဟိုတောင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Homalin Township (Sagaing) | ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Homein Township (Shan State) | ဟိုမိန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Hopan Township (Shan State) | ဟိုပန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Hopin Township (Kachin State) | ဟိုပင်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Hopon Township (Shan State) | ဟိုပုံး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Hpa Yar Gyi | ဘုရားကြီး Hpa-An (Kayin State) | ဘားအံ(ကရင်ပြည်နယ်) Hpakant Township (Kachin State) | ဖားကန့်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Hpapun (Kayin State) | ဖာပွန် (ကရင်ပြည်နယ်) Hpasawng Township (Kayah State) | ဖားဆောင်းမြို့နယ် (ကယားပြည်နယ်) Hpruso Township (Kayah State) | ဖရူဆိုမြို့နယ် (ကယားပြည်နယ်) Hseni Township (Shan State) | သိန်နီ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Hsihseng Township (Shan State) | ဆီဆိုင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Hsipaw Township (Shan State) | သီပေါ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Htantabin Township (Bago) | ထန်းတပင်မြို့နယ် (ပဲခူး) Htantabin Township (YGN) | ထန်းတပင်မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Htigyaing Township (Sagaing) | ထီးချိုင့်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Ichang Township (Shan State) | အိုက်ချန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Indaw Township (Sagaing) | အင်းတော်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Ingapu Township (Ayeyarwady) | အင်္ဂပူ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Inma | အင်းမ Inn Ta Kaw | အင်းတကော် Insein Township (YGN) | အင်းစိန် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Intaw Township (Shan State) | အင်တော မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Ka Naung Township (Ayeyarwady) | ကနောင် မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ka Nyut Kwin | ကညွတ်ကွင်း Kalaungphar Township (Shan State) | ကလောင်ဖာ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kalaw Township (Shan State) | ကလော မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kale (Sagaing) | ကလေး (စစ်ကိုင်း) Kalewa Township (Sagaing) | ကလေးဝမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Kamaing Township (Kachin State) | ကာမိုင်းမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Kamayut Township (YGN) | ကမာရွတ် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Kamma Township (Magway) | ကံမမြို့နယ် (မကွေး) Kan Paik Ti Township (Kachin State) | ကန်ပိုက်တီမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Kanbalu Township (Sagaing) | ကန့်ဘလူ (စစ်ကိုင်း) Kangyidaunt Township (Ayeyarwady) | ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Kani Township (Sagaing) | ကနီမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Kanpetlet Township (Chin State) | ကန်ပက်လက်မြို့နယ် (ချင်းပြည်နယ်) Kar Li Township (Shan State) | ကာလိ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Katha (Sagaing) | ကသာ (စစ်ကိုင်း) Kaw Thaung (Tanintharyi) | ကော့သောင်း မြို့ (တနင်္သာရီ) Kawa Township (Bago) | ကဝ မြို့နယ် (ပဲခူး) Kawhmu Township (YGN) | ကော့မှုးမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Kawkareik (Kayin State) | ကော့ကရိတ် (ကရင်ပြည်နယ်) Kawlin (Sagaing) | ကောလင်း (စစ်ကိုင်း) Keng Tung Township (Shan State) | ကျိုင်းတုံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kenglat Township (Shan State) | ကျိုင်းလပ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kengtawng Township (Shan State) | ကျိုင်းတောင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Khaunglanhpu Township (Kachin State) | ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Khayan Township (YGN) | ခရမ်းမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Khin-U Township (Sagaing) | ခင်ဦးမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Kho Lan Township (Shan State) | ခိုလန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Khun Ma Township (Shan State) | ခွန်းမား မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Konkyan Township (Shan State) | ကုန်းကြမ်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kungyangon Township (YGN) | ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Kunhing Township (Shan State) | ကွန်ဟိန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kunlong Township (Shan State) | ကွမ်းလုံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kutkai Township (Shan State) | ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kwin Kauk | ကွင်းကောက် Kyaik Hto Township (Mon State) | ကျိုက်ထိုမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Kyaikkaw | ကျိုက်ကော် Kyaikkhami | ကျိုက်ခမီ Kyaiklat Township (Ayeyarwady) | ကျိုက်လတ် မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Kyaikmayaw Township (Mon State) | ကျိုက်မရောမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Kyainseikgyi Township (Kayin State) | ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် (ကရင်ပြည်နယ်) Kyangin Township (Ayeyarwady) | ကြံခင်း မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Kyaukkyi Township (Bago) | ကျောက်ကြီး မြို့နယ် (ပဲခူး) Kyaukme Township (Shan State) | ကျောက်မဲ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kyaukpadaung Township (MDY) | ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် (မန္တလေး) Kyaukpyu (Rakhine State) | ကျောက်ဖြူ (ရခိုင်ပြည်နယ်) Kyaukse (MDY) | ကျောက်ဆည် (မန္တလေး) Kyauktada Township (YGN) | ကျောက်တံတားမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Kyauktaga | ကျောက်တံခါး Kyauktan Township (YGN) | ကျောက်တန်းမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Kyauktaw Township (Rakhine State) | ကျောက်တော်မြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Kyaunggon Township (Ayeyarwady) | ကျောင်းကုန်း မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Kyethi Township (Shan State) | ကျေးသီး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Kyimyindaing Township (YGN) | ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Kyonmange Township (Ayeyarwady) | ကျုံမငေး မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Kyonpyaw (Ayeyarwady) | ကျုံပျော် (ဧရာဝတီ) Kyontani | ကျုံတနိ Kyunhla Township (Sagaing) | ကျွန်းလှမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Kyunsu Township (Tanintharyi) | ကျွန်းစု မြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Labutta (Ayeyarwady) | လပွတ္တ (ဧရာဝတီ) Lahe Township (Sagaing) | လဟယ်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Laihka Township (Shan State) | လဲချား မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Langkho Township (Shan State) | လင်းခေး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Lanmadaw Township (YGN) | လမ်းမတော် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Lashio Township (Shan State) | လားရှိုး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Latha Township (YGN) | လသာ မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Latpadan (ThanZawKo) | လက်ပံတန်း (သန်းဇော်ကို) Latpadan Township (Bago) | လက်ပံတန်း မြို့နယ် (ပဲခူး) Launglon Township (Tanintharyi) | လောင်းလုံ မြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Lawksawk Township (Shan State) | ရပ်စောက် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Lemyethna Township (Ayeyarwady) | လေးမျက်နှာ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Lewe Township (NPT) | လယ်ဝေးမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Linghao Township (Shan State) | လင်ဟော် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Loikaw (Kayah State) | လွိုင်ကော် (ကယားပြည်နယ်) Loilem Township (Shan State) | လွိုင်လင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Long Thang Township (Shan State) | လုံထန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Lwegel Township (Kachin State) | လွယ်ဂျယ်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Mabein Township (Shan State) | မဘိမ်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Machanbaw Township (Kachin State) | မချမ်းဘောမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Madaya Township (MDY) | မတ္တရာမြို့နယ် (မန္တလေး) Magway | မကွေး Mahaungmyay Township (MDY) | မဟာအောင်မြေမြို့နယ် (မန္တလေး) Mahlaing Township (MDY) | မလှိုင်မြို့နယ် (မန္တလေး) Mandalay | မန္တလေး Mankan Township (Shan State) | မန်ကန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Manman Shop Township (Shan State) | မန်မန်ဆိုင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mansi Township (Kachin State) | မံစီမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Manthe Hero City (Shan State) | မန့်ဟီးရိုးမြို့ (ရှမ်းပြည်နယ်) Manton Township (Shan State) | မန်တွန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mantong Township (Shan State) | မန်တုံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Matman Township (Shan State) | မက်မန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Matupi (Chin State) | မတူပီ (ချင်းပြည်နယ်) Maubin (Ayeyarwady) | မအူပင် (ဧရာဝတီ) Maungdaw (Rakhine State) | မောင်တော (ရခိုင်ပြည်နယ်) Maw Htike Township (Shan State) | မော်ထိုက် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mawgyun | မော်ကျွန်း Mawkmai Township (Shan State) | မောက်မယ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mawlaik (Sagaing) | မော်လိုက် (စစ်ကိုင်း) Mawlamyine (Mon State) | မော်လမြိုင်(မွန်ပြည်နယ်) Mayangon Township (YGN) | မရမ်းကုန်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Meiktila (MDY) | မိတ္ထီလာ(မန္တလေး) Mese Township (Kayah State) | မယ်စဲ့မြို့နယ် (ကယားပြည်နယ်) Minbu (Magway) | မင်းဘူး (မကွေး) Minbya Township (Rakhine State) | မင်းပြားမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Mindat (Chin State) | မင်းတပ် (ချင်းပြည်နယ်) Mindon Township (Magway) | မင်းတုန်းမြို့နယ် (မကွေး) Mingala Taungnyunt Township (YGN) | မင်္ဂလာ‌တောင်ညွန့် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Mingaladon Township (YGN) | မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Mingin Township (Sagaing) | မင်းကင်းမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Minhla Township (Bago) | မင်းလှ မြို့နယ် (ပဲခူး) Minhla Township (Magway) | မင်းလှမြို့နယ် (မကွေး) Moebyel | မိုးဗြဲ Mogaung Township (Kachin State) | မိုးကောင်းမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Mogok Township (MDY) | မိုးကုတ်မြို့နယ် (မန္တလေး) Mohnyin (Kachin State) | မိုးညှင်း (ကချင်ပြည်နယ်) Moke Ta Ma | မုတ္တမ Momauk Township (Kachin State) | မိုးမောက်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Monekoe Township (Shan State) | မုန်းကိုး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Hpayak Township (Shan State) | မိုင်းဖြတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Hsat Township (Shan State) | မိုင်းဆတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Hsat Township (Shan State) | မိုင်းဆတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Hsu Township (Shan State) | မိုင်းရှူး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Hta Township (Shan State) | မုန်းထ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Kung Township (Shan State) | မိုင်းကိုင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mong Phyan Township (Shan State) | မိုင်းဖျန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongka Township (Shan State) | မိုင်းကာ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongkhet Township (Shan State) | မိုင်းခတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongkhoke Township (Shan State) | မိုင်းခုတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongla Township (Shan State) | မိုင်းလား မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Monglon Township (Shan State) | မိုင်းလုံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongmao Township (Shan State) | မိုင်းမော မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongmit Township (Shan State) | မိုးမိတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongnai Township (Shan State) | မိုးနဲ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongnawng Township (Shan State) | မိုင်းနောင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongngaw Township (Shan State) | မိုင်းငေါ့ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongpan Township (Shan State) | မိုင်းပန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongpauk Township (Shan State) | မိုင်းပေါက် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongping Township (Shan State) | မိုင်းပြင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongsan Township (Shan State) | မိုင်းစံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongyai Township (Shan State) | မိုင်းရယ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongyawng Township (Shan State) | မိုင်းယောင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mongyu Township (Shan State) | မိုင်းယု မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Monyo Township (Bago) | မိုးညို မြို့နယ် (ပဲခူး) Monywa (Sagaing) | မုံရွာ (စစ်ကိုင်း) Mrauk-U (Rakhine State) | မြောက်ဦး (ရခိုင်ပြည်နယ်) Mudon Township (Mon State) | မုဒုံမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Munaung Township (Rakhine State) | မာန်အောင်မြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Muse Township (Shan State) | မူဆယ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Mya Sein Yaung | မြစိမ်းရောင် Myaing Township (Magway) | မြိုင်မြို့နယ် (မကွေး) Myanaung (Ayeyarwady) | မြန်အောင် (ဧရာဝတီ) Myaung Township (Sagaing) | မြောင်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Myaungmya (Ayeyarwady) | မြောင်းမြ (ဧရာဝတီ) Myawaddy (Kayin State) | မြဝတီ (ကရင်ပြည်နယ်) Myebon Township (Rakhine State) | မြေပုံမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Myeik (Tanintharyi) | မြိတ် (တနင်္သာရီ) Myingyan (MDY) | မြင်းခြံ (မန္တလေး) Myinmu Township (Sagaing) | မြင်းမူမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Myitkyina (Kachin State) | မြစ်ကြီးနား (ကချင်ပြည်နယ်) Myittha Township (MDY) | မြစ်သားမြို့နယ် (မန္တလေး) Myo Hla Township (Kachin State) | မြို့လှမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Myothit Township (Magway) | မြို့သစ်မြို့နယ် (မကွေး) N Jang Yang Township (Kachin State) | အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Na Phang Township (Shan State) | နားဖန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Namhkan Township (Shan State) | နမ့်ခမ်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Namhsan Township (Shan State) | နမ့်ဆန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Namkhamwu Township (Shan State) | နမ်ခမ်းဝူး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Namphai Township (Shan State) | နမ့်ဖိုင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Namsang Township (Shan State) | နမ့်စန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Namtu Township (Shan State) | နမ်မတူ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Nan Pan Township (Shan State) | နန်းပန် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Nanmati Township (Kachin State) | နမ္မတီးမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Nar Kong Township (Shan State) | နားကောင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ် Natmauk Township (Magway) | နတ်မောက်မြို့နယ် (မကွေး) Natogyi Township (MDY) | နွားထိုးကြီးမြို့နယ် (မန္တလေး) Nattalin Township (Bago) | နတ္တလင်း မြို့နယ် (ပဲခူး) Naung Khit Township (Shan State) | နောင်ခစ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Naungcho Township (Shan State) | နောင်ချို မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Naungtayar Township (Shan State) | နောင်တရား မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Navi Township (Shan State) | နာဝီ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Naypyitaw | နေပြည်တော် Nga Yoke Kaung Township (Ayeyarwady) | ငရုတ်ကောင်း မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ngape Township (Magway) | ငဖဲမြို့နယ် (မကွေး) Ngapudaw Township (Ayeyarwady) | ငပုတော မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ngathaingchaung Township (Ayeyarwady) | ငသိုင်းချောင်းမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ngazun Township (MDY) | ငါန်းဇွန်မြို့နယ် (မန္တလေး) Ngwe Pin Lal | ငွေပင်လယ် Ngwesaung Township (Ayeyarwady) | ငွေဆောင် မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Nogmung Township (Kachin State) | နောင်မွန်းမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) North Dagon Township (YGN) | ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) North Okkalapa Township (YGN) | မြောက်‌ဥက္ကလာပ မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Nyaung Lay Pin Township (Bago) | ညောင်လေးပင်မြို့နယ် (ပဲခူး) Nyaung-U (MDY) | ညောင်ဦး (မန္တလေး) Nyaungdon Township (Ayeyarwady) | ညောင်တုန်းမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Nyaungshwe Township (Shan State) | ညောင်ရွှေ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Nyaungyan | ညောင်ရမ်း Oak Pho Township (Bago) | အုတ်ဖို မြို့နယ် (ပဲခူး) Oakkan Township | ဥက္ကံမြို့ Oktwin Township (Bago) | အုတ်တွင်း မြို့နယ် (ပဲခူး) Ottara Thiri Township (NPT) | ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Pabedan Township (YGN) | ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Padaung Township (Bago) | ပန်းတောင်း မြို့နယ် (ပဲခူး) Pakokku (Magway) | ပခုက္ကူ (မကွေး) Palaw Township (Tanintharyi) | ပုလော မြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Pale Township (Sagaing) | ပုလဲမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Paletwa Township (Chin State) | ပလက်ဝမြို့နယ် (ချင်းပြည်နယ်) Pang Hseng Township (Shan State) | ပန်ဆိုင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Pang War Township (Kachin State) | ပန်ဝါမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Panghsang Township (Shan State) | ပန်ဆန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Pangkham Township (Shan State) | ပန်ခမ့် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Pangwaun Township (Shan State) | ပန်ဝိုင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Panlong Township (Shan State) | ပန်လုံ မြို့ (ရှမ်းပြည်နယ်) Pannandin Township (Kachin State) | ပန်နန်းဒင်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Pantanaw Township (Ayeyarwady) | ပန်းတနော်မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Panyang City (Shan State) | ပန်ယန်းမြို့ (ရှမ်းပြည်နယ်) Pathein (Ayeyarwady) | ပုသိမ် (ဧရာဝတီ) Patheingyi Township (MDY) | ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် (မန္တလေး) Pauk Township (Magway) | ပေါက်မြို့နယ် (မကွေး) Paukkhaung Township (Bago) | ပေါက်ခေါင်း မြို့နယ် (ပဲခူး) Pauktaw Township (Rakhine State) | ပေါက်တောမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Paung Township (Mon State) | ပေါင်မြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Paungbyin Township (Sagaing) | ဖောင်းပြင်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Paungde Township (Bago) | ပေါင်းတည် မြို့နယ်(ပဲခူး) Pazundaung Township (YGN) | ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Pekon Township (Shan State) | ဖယ်ခုံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Phyu Township (Bago) | ဖြူးမြို့နယ် (ပဲခူး) Pindaya Township (Shan State) | ပင်းတယ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Pinlaung Township (Shan State) | ပင်လောင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Pinlebu Township (Sagaing) | ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Pinlon Township (Shan State) | ပင်လုံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Pobba Thiri Township (NPT) | ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ် (နေပြည်တော်) Ponnagyun Township (Rakhine State) | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Ponparkyin Township (Shan State) | ပုံပါကျင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Puta-O (Kachin State) | ပူတာအို (ကချင်ပြည်နယ်) Pwintbyu Township (Magway) | ပွင့်ဖြူမြို့နယ် (မကွေး) Pyapon (Ayeyarwady) | ဖျာပုံ (ဧရာဝတီ) Pyawbwe (Meiktila - Shwe Taung Pan) | ပျော်ဘွယ် (မိတ္ထီလာ - ရွှေတောင်ပံ) Pyawbwe (YarZar) | ပျော်ဘွယ် (ရာဇာ) Pyawbwe Township (MDY) | ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် (မန္တလေး) Pyay (Bago) | ပြည် (ပဲခူး) Pyigyidagun Township (MDY) | ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် (မန္တလေး) Pyin Oo Lwin | ပြင်ဦးလွင် Pyinmana Township (NPT) | ပျဉ်းမနားမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Pyinsalu Township (Ayeyarwady) | ပြင်စလူ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Ramree Township (Rakhine State) | ရမ်းဗြဲမြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Rathedaung Township (Rakhine State) | ရသေ့တောင်မြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Sadung Township (Kachin State) | ဆဒုံးမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Sagaing (Sagaing) | စစ်ကိုင်း (စစ်ကိုင်း) Salin Township (Magway) | စလင်းမြို့နယ် (မကွေး) Salingyi Township (Sagaing) | ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Sanchaung Township (YGN) | စမ်းချောင်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Sar Ma Lout | ဆားမလောက် Saw Township (Magway) | ဆောမြို့နယ် (မကွေး) Seikkan Township (YGN) | ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Seikkyi Kanaungto Township (YGN) | ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Seikphyu Township (Magway) | ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် (မကွေး) Shadaw Township (Kayah State) | ရှားတောမြို့နယ် (ကယားပြည်နယ်) Shin Bway Yang Township (Kachin State) | ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Shwe Lin Ban | ရွှေလင်ဗန်း Shwebo (Sagaing) | ရွှေဘို (စစ်ကိုင်း) Shwegu Township (Kachin State) | ရွှေကူမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Shwegyin Township (Bago) | ရွှေကျင်မြို့နယ် (ပဲခူး) Shwenyaung Township (Shan State) | ရွှေညောင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Shwepyitha Township (YGN) | ရွှေပြည်သာမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Shwetaung Township (Bago) | ရွှေတောင် မြို့နယ် (ပဲခူး) Shwethaungyan Township (Ayeyarwady) | ရွှေသောင်ယံ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Sidoktaya Township (Magway) | စေတုတ္တရာမြို့နယ် (မကွေး) Sinbaungwe Township (Magway) | ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် (မကွေး) Sinbo Township (Kachin State) | ဆင်ဘိုမြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Singu Township (MDY) | စဉ့်ကူးမြို့နယ် (မန္တလေး) Sintgaing Township (MDY) | စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် (မန္တလေး) Sittwe (Rakhine State) | စစ်တွေ (ရခိုင်ပြည်နယ်) Songfa Township (Shan State) | ဆောင်ဖ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) South Dagon Township (YGN) | ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) South Okkalapa Township (YGN) | တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ( ရန်ကုန်) Sumprabum Township (Kachin State) | ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Tabayin Township (Sagaing) | ဒီပဲယင်းမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Tachileik Township (Shan State) | တာချီလိတ် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Tada-U Township (MDY) | တံတားဦးမြို့နယ် (မန္တလေး) Taikkyi Township (YGN) | တိုက်ကြီးမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Tamoenye Township (Shan State) | တာမိုးညဲ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Tamu (Sagaing) | တမူး (စစ်ကိုင်း) Tamwe Township (YGN) | တာမွေ မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Tangyan Township (Shan State) | တန့်ယန်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Tanintharyi Township (Tanintharyi) | တနင်္သာရီ မြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Tarlay Township (Shan State) | တာလေ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Tatkon Township (NPT) | တပ်ကုန်းမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Taungdwingyi (Myothit) | တောင်တွင်းကြီး (မြို့သစ်) Taungdwingyi Township (Magway) | တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် (မကွေး) Taunggyi Township (Shan State) | တောင်ကြီး မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Taungoo (Bago) | တောင်ငူ (ပဲခူး) Taungtha Township (MDY) | တောင်သာမြို့နယ် (မန္တလေး) Taungup Township (Rakhine State) | တောင်ကုတ်မြို့နယ် (ရခိုင်ပြည်နယ်) Taze Township (Sagaing) | တန့်ဆည်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Tedim Township (Chin State) | တီးတိန်မြို့နယ် (ချင်းပြည်နယ်) Thabaung Township (Ayeyarwady) | သာပေါင်းမြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Thabeikkyin Township (MDY) | သပိတ်ကျဉ်းမြို့နယ် (မန္တလေး) Thaketa Township (YGN) | သာကေတမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Than Daung Gyi Township (Kayin State) | သံတောင်ကြီးမြို့နယ် (ကရင်ပြည်နယ်) Thanatpin Township (Bago) | သနပ်ပင် မြို့နယ် (ပဲခူး) Thanbyuzayat Township (Mon State) | သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Thandwe (Rakhine State) | သံတွဲ (ရခိုင်ပြည်နယ်) Thanlyin Township (YGN) | သန်လျင်မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Thantlang Township (Chin State) | ထန်တလန်မြို့နယ် (ချင်းပြည်နယ်) Thaton (Mon State) | သထုံ (မွန်ပြည်နယ်) Thayarwaddy (Bago) | သာယာ၀တီ (ပဲခူး) Thayet (Magway) | သရက် (မကွေး) Thayetchaung Township (Tanintharyi) | သရက်ချောင်းမြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Thazi Township (MDY) | သာစည်မြို့နယ် (မန္တလေး) Thegon Township (Bago) | သဲကုန်း မြို့နယ် (ပဲခူး) Theinzayat | သိမ်ဇရပ် Thilawa Industrial Zone (YGN) | သီလဝါစက်မှုဇုန် (ရန်ကုန်) Thingangyun Township (YGN) | သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Thone Sal Township | သုံးဆယ်မြို့ Thonegwa Township (YGN) | သုံးခွမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Tikyit | တီကျစ် Tilin Township (Magway) | ထီးလင်းမြို့နယ် (မကွေး) Tong Tar Township (Shan State) | တုံတာ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Tonzang Township (Chin State) | တွန်းဇံမြို့နယ် (ချင်းပြည်နယ်) Tsawlaw Township (Kachin State) | ဆော့လော်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Tugyi Township (Ayeyarwady) | ထူးကြီး မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Twantay Township (YGN) | တွံတေးမြို့နယ် (ရန်ကုန်) Waingmaw Township (Kachin State) | ဝိုင်းမော်မြို့နယ် (ကချင်ပြည်နယ်) Wakema Township (Ayeyarwady) | ဝါးခယ်မ မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Wartayar | ဝါးတစ်ရာ Watpoke | ဝက်ပုပ် Waw Township (Bago) | ဝေါ မြို့နယ် (ပဲခူး) Wetlet Township (Sagaing) | ဝက်လက်မြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Win Kaung Township (Shan State) | ဝိန်းကောင် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Wundwin Township (MDY) | ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် (မန္တလေး) Wuntho Township (Sagaing) | ဝန်းသိုမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Yamethin (MDY) | ရမည်းသင်း (မန္တလေး) Yanaung | ရန်အောင် Yangon | ရန်ကုန် Yankin Township (YGN) | ရန်ကင်း မြို့နယ် (ရန်ကုန်) Yau Lin Township (Shan State) | ယောင်လင်း မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Yay Township (Mon State) | ရေးမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) Yay Township (Mon State) (Win) | ရေးမြို့နယ် (မွန်ပြည်နယ်) (ဝင်း) Yay Township-Chaung Taung (Mon State) | ရေးမြို့နယ်-ချောင်းတောင် (မွန်ပြည်နယ်) Yay Township-Setse (Mon State) | ရေးမြို့နယ်-စက်စဲ (မွန်ပြည်နယ်) Ye-U Township (Sagaing) | ရေဦးမြို့နယ် (စစ်ကိုင်း) Yebyu Township (Tanintharyi) | ရေဖြူ မြို့နယ် (တနင်္သာရီ) Yedashe Township (Bago) | ရေတာရှည်မြို့နယ် (ပဲခူး) Yedashe Township-Myohla (Bago) | ရေတာရှည်မြို့နယ်-မြို့လှ (ပဲခူး) Yedashe Township-Swar (Bago) | ရေတာရှည်မြို့နယ်-ဆွာ (ပဲခူး) Yegyi Township (Ayeyarwady) | ရေကြည် မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Yenangyaung Township (Magway) | ရေနံချောင်းမြို့နယ် (မကွေး) Yesagyo Township (Magway) | ရေစကြိုမြို့နယ် (မကွေး) Yin Mar Bin (Sagaing) | ယင်းမာပင် (စစ်ကိုင်း) Yinfang Township (Shan State) | ရင်ဖန့် မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Ywangan Township (Shan State) | ရွာငံ မြို့နယ် (ရှမ်းပြည်နယ်) Zabu Thiri Township (NPT) | ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Zalun Township (Ayeyarwady) | ဇလွန်မြို့နယ် (ဧရာဝတီ) Zayat Kwin | ဇရပ်ကွင်း Zeya Thiri Township (NPT) | ဇေယျာသီရိမြို့နယ် (နေပြည်တော်) Zigon Township (Bago) | ဇီးကုန်းမြို့နယ် (ပဲခူး)
Business Type * -- Please Choose -- ကုန်စုံဆိုင် Other
အေးဂျင့် ဆိုသည်မှာ Gift Payment Service တွင် အေးဂျင့် မှတ်ပုံတင် ပုံစံ ၌ ဖြည့်သွင်းပြီး အေးဂျင့် လျှောက်ထားသူများထဲမှ Gift ဘက်မှ အတည်ပြုပေးထားသော အေးဂျင့်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများ ဆိုသည် မှာ Gift Payment Service မှ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဝန်‌ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။
2. အေးဂျင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Gift Application တွင် အေးဂျင့် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အထောက်အထားများအား ပူးတွဲပေးပို့၍ အေးဂျင့် ပြုလုပ်ရန် မှတ်ပုံတင်သွင်းနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူအား Gift မှ အတည်ပြုပေးလိုက်သည်နှင့် အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
3. အေးဂျင့်၏ တာဝန်များ
အေးဂျင့်သည် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ ဝန်ဆောင်မှုများ အား Gift ၏ ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။
အေးဂျင့်သည် မိမိအား သတ်မှတ်ထားသည့် Level ရှိ ကန့်သတ် ပမာဏများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် နှင့် ကန့်သတ် ပမာဏ ကျော်လွန်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။
ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းများအား Gift မှ သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံများဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အလုံးစုံကို မှတ်တမ်းထားရန်နှင့် Gift (သို့) ဘဏ် မှ တောင်းခံလာပါက မှတ်တမ်းများအား ပေးပို့ ပြသနိုင်ရမည်။ မှတ်တမ်းများကို အနည်းဆုံး ( ) နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
အေးဂျင့်သည် GIFT မှ ထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သုံးစွဲသူ များထံ ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည် ။
အေးဂျင့် နှင့် သုံးစွဲသူ အကြား တစ်စုံတစ်ရာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်လျှင် GIFT အားချက်ချင်း ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ပြီး GIFT သည် သင့်လျော်သော ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အေးဂျင့်သည် မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊
4. အခကြေးငွေများနှင့် ကော်မရှင်ခများ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုစီအတွက် သုံးစွဲသူများထံ ကောက်ခံရမည့် နှုန်းထားများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကောက်ခံရမည်။
အေးဂျင့် သို့ ပေးချေရမည့် ကော်မရှင်ခများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုပြီးတိုင်း အေးဂျင့်၏ Account စာရင်းထဲ သို့ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအတိုင်း ထည့်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
အေးဂျင့်ထံမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုစီအတွက် GIFT မှ ရရန်ရှိသော အခကြေးငွေများအား အေးဂျင့်၏ Account စာရင်းထံမှ ခုနှိမ်၍ ရယူခွင့် ရှိသည်။
5. အေးဂျင့်၏ ဝန်ခံကတိပြုမှုများ
အေးဂျင့်သည် အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်
GIFT မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်လိုက်နာရမည်။
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ စသဖြင့် GIFT မှ တရားဝင် ခန့်အပ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းမှ အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံလာပါက အပြည့်အစုံ တင်ပြပေးရမည်
GIFT ထံသို့ ပြန်လည် ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိသော ငွေသားများ နှင့် သုံးစွဲသူထံမှ ကောက်ခံရရှိသော ငွေသားများကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန် နှင့် GIFT မှ သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်။
GIFT ထံသို့ ပြန်လည် ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိသော ငွေသားများ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပျောက်ဆုံခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရခြင်း ဖြစ်ပါက အေးဂျင့် မှ တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး GIFT ထံသို့ ပေးချေရမည့် စာရင်းပမာဏအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်။
အေးဂျင့် Account ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ အား မပေါက်ကြားစေရန် သိမ်းဆည်းရမည်။
GIFT တွင် ဆောင်ရွက်ထားသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် စာရင်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား လျို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းခံလာပါက ပြသခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း မပြုရပါ။
6. အေးဂျင့်မှ ငွေသွင်းခြင်း နှင့် ငွေထုတ်ခြင်း
အေးဂျင့် သည် မိမိ၏ Agent Account သို့ ငွေသွင်းလိုပါက ငွေသားအား GIFT ၏ သတ်မှတ်ထားသော Bank Account သို့ ငွေသွင်း၍ bankslip အား Cash in payslip တွင် upload ၍ သော်လည်းကောင်း ၊ အေးဂျင့်၏ ဘဏ် အကောင့် မှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်း၍ သော်လည်းကောင်း ငွေသွင်းနိုင်သည်။
‌အေးဂျင့် သည် မိမိ၏ Agent Account ထဲမှ ငွေပြန်ထုတ်လိုပါက Agent Account မှ Bank Account သို့ လွဲပြောင်း၍ ဖြစ်စေ နီးစပ်ရာ Agent Account သို့ သွား၍ ဖြစ်စေ ငွေထုတ်နိုင်ပါသည်။
7. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်များ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ပြီးမြောက် ပါက လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ (Notification Message) ရောက်ရှိလာမည်။
အေးဂျင့်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလျှင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ ထက်ပိုသော ပမာဏ အား ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရပါ။
အေးဂျင့် မှ မှားယွင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများသည် Agent တွင်သာ တာဝန်ရှိပြီး ဆုံးရှုံးမှုအတွက် GIFT တွင် တာဝန်မရှိစေရ။
8. အေးဂျင့်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း
အေးဂျင့်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မသမာသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည်တို့ ရှိခဲ့လျှင် GIFT ၏ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့် အေးဂျင့်အဖြစ်မှ တာဝန်ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။
အေးဂျင့် မှ မိမိ၏ ဆန္ဒဖြင့် အေးဂျင့်အဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုလျှင် GIFT ထံသို ရက်ပေါင်း (၃၀) ကြိုတင် အကြောင်းကြားရမည်။
အေးဂျင့်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပါက GIFT နှင့် အေးဂျင့် အကြားကျန်ရှိသည့် ပေးရန်ရရန် အားလုံးကို စားရင်းရှင်းလင်းခြင်း ပြီးဆုံးမှသာ ရပ်စဲနိုင်သည်။